आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक ९ गते। शुक्रबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 On Oct 25, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर २६ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष। तिथि– द्वितीया, २१:१० बजेउप्रान्त तृतीया। नक्षत्र– भरणी, १०:४८ बजेउप्रान्त कृत्तिका। योग– सिद्धि, ८:२९ बजेउप्रान्त व्यतीपात। करण– तैतिल, ९:३८ बजेदेखि गर, २१:१० बजेउप्रान्त वणिज। आनन्दादिमा मुद्गर योग। चन्द्रराशि– मेष, १६:४५ बजेउप्रान्त वृष। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:११ बजे, सूर्यास्त– १७:२३ बजे र दिनमान २८ घडी ०० पला।
स्वास्थ्य पूर्णत ठीक रहनेछ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। तपाईंको खर्चिलो जीवनशैलीले घरमा तनाउ उत्पन्न गराउँछ, त्यसैले धेरै रातसम्म बाहिर बस्ने र अरूलाई धेरै खर्च गर्नबाट जोगिनुहोस्। तपाईं आफ्नो समूह भित्र घुम्नुभयो भने विशेष कसैको आँखा फेला पार्नु हुनेछ। काममा आजको दिनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको आन्तरिक शक्तिले पनि उत्तिकै सहयोग दिनेछ। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस् – तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
तपाईंको तेज कार्यले तपाईंको धेरै दिनदेखिको समस्या समाधान हुनेछ। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। साथीहरूसँग साँझमा बाहिर निस्किनुहोस्, यसले धेरै राम्रो गर्नेछ। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। आज गरेका संयुक्त उद्यमहरू अन्ततः लाभदायी हुनेछन्, तर तपाईंलाई साझेदारको केही विरोधको सामना गर्नु पर्नेछ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
तपाईंलाई साह्रै तनाउ भएको महसुस भयो भने – बच्चाहरुसँग बढी समय बिताउनुहोस्। तिनीहरूको न्यानो अंकमाल / लुटुपुटु वा निर्दोष मुस्कानले तपाईंलाई आफ्नो दुःखबाट छुटकारा मिल्न सक्छ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। अरू मान्छेको सुझाव सुन्ने र काम गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। भोलि धेरै देरी हुन सक्छ यसैले तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई आफ्नो सन्देश व्यक्त गर्नुपर्छ। आज काममा तपाईंका टीमको सबैभन्दा रिसालु व्यक्ति अचानक बौद्धिक बन्न सक्छ। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आज तपाईं विवाहित भएको कारण आफैंलाई भाग्यशाली महसुस गर्नु हुँदैछ।
आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य सुधार गर्न संतुलित आहार खानुहोस्। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। कार्डमा रोमान्स छ तर इन्द्रियका भावनाहरू प्रकट हुनाले तपाईंको सम्बन्ध बिगार्नेछ। यदि तपाईंले लामो समयदेखि काममा कसैसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ भने, आज तपाईं भाग्यशाली हुन सक्नु हुनेछ। यात्राले तपाईंलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्न सघाउँछ। तपाईंको जोडीलाई तपाईंको पुरानो गोप्य कुरा थाहा लाग्नाले केही चोट पर्न सक्छ।
तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। सुखद र सुन्दर साँझको लागि तपाईंको घरमा अतिथिहरूको भीड लाग्नेछ। यात्राले मायाप्रिती फैलाउनेछ। विवाद वा कार्यालयको राजनीति; तपाईंले आज सबैमा शासन गर्नुहुनेछ। तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ
तेल र मसालादार आहार नगर्नुहोस्। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईंको घरेलू दृश्य केहि अप्रत्याशित हुनेछ। तपाईंकी प्रेमीकाको नराम्रो व्यवहारले आज रोमान्समा बाधा पर्नेछ। तपाईंका वरिष्ठहरू आज तपाईंको कामको गुणस्तरले प्रभावित हुन सक्छन्। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। आज तपाईंको आफ्नो जोडीसित गम्भीर तर्क हुन सक्छ।
विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईंको भरोसा बढाउनेछ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। आज काममा तपाईंको सफलताको दिन हुनेछ! आज तपाईंले आफ्नो मनको जाँच गर्नु हुनेछ – तपाईंहरू कसैले चेस-क्रोसवर्ड खेल्न लाग्नुहुनेछ भने कसैले कथा-कविता लेख्नु हुनेछ वा भविष्यको बारेमा केही योजना बनाउनुहुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आजभोली कुनै खुशी छैन; आफ्नो जोडीसँग कुरा गर्नुहोस् र साँच्चै रमाइलो केही योजना गर्नुहोस्।
तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्नुहोस् र सकेसम्म छिट्टै डरबाट छुटकारा हुनुहोस्, किनकि कार्डमा स्वास्थ्यमा तत्काल प्रभाव पर्ने र राम्रोसँग स्वास्थ्यको आनन्द लिने तपाईंको बाटोमा रहेको अवरोध बढ्ने सम्भावना छ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। तपाईंले छोराछोरी वा तपाईं भन्दा कम अनुभवीहरूसँग धैर्य धारण गर्नुपर्छ। आफ्नो ऊर्जा र आवेगको कायापलट गर्न खुशियाली यात्रामा जाने सम्भावना छ। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। तपाईं आफ्नो योजना बारे खुल्ला हुनुहुन्छ भने आफ्नो परियोजना नष्ट गर्नुहुनेछ। दान र सामाजिक कार्यले आज तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछ – तपाईंले महान कार्यको लागि आफ्नो समय दिनुभयो भने तपाईंले धेरै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ। हो, तपाईंको जोडी त्यो जीवनसाथी हो।
आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा नराम्रो वित्तीय स्थितिको कारण रोक लाग्नेछ। आफन्तहरूका घरमा जानाले तपाईंले सोचेभन्दा धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईंले राम्ररी विकास गरेकोले प्रेम जीवनले पनि एउटा मोड लिनेछ। योजना लागू गर्न र नयाँ उद्यममा हस्ताक्षर गर्नको लागि राम्रो दिन। तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्। आज, तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै गहिरो आत्मीय प्रेमालाप गर्नु हुनेछ।
स्वभावको चटारोले तर्क र टकराव उत्पन्न गराउन सक्छ। उचित प्रयोग गरेमा तपाईंको रचनात्मक प्रतिभा अत्यधिक आकर्षक साबित हुनेछ। मित्र र आफन्तहरूले सहायता गर्नेछन् र तपाईं तिनीहरूसँग एकदम खुसी हुनुहुनेछ। तपाईं आफ्नो कल गर्ने देरी गरेर आफ्नो प्रेमी साथीलाई जिस्क्याउनु हुनेछ। काममा आजको दिनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको आन्तरिक शक्तिले पनि उत्तिकै सहयोग दिनेछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। गलतफहमीको नराम्रो चरण पछि, साँझसम्ममा तपाईंको जोडीको प्रेम पाउनुहुनेछ।
रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। टाढाका आफन्तबाट आएको अप्रत्याशित समाचारले तपाईँको दिन उज्यालो पार्नेछ। तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्। तपाईंले लामो समयदेखि काम गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनामा ढिलाइ भएको छ। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्; अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक ८ गते। बिहीबार।